बुटवल–नारायणगढ सडक : सरकारको गफ द्रूतगति, निर्माण कार्य सुस्तगति !:: Naya Nepal
बुटवल–नारायणगढ सडक : सरकारको गफ द्रूतगति, निर्माण कार्य सुस्तगति !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो तामझामका साथ शिलान्यास गरेको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको कामले डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत गति लिएको छैन ।
आयोजनालाई ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि झण्डै १८ महिनासम्म भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
द्रूतगतिमा काम गरिने भन्दै २०७५ चैत ८ गते ओलीले सडक विस्तार कार्यको बुटवलमा शिलान्यास गरेका थिए । २०८० साउन २२ गतेसम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय महत्त्वको ‘एक्सप्रेस हाइवे’का रूपमा सडकलाई बस्तीमा ६ र जंगलमा ४ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनीयर शान्तराम दाहालले रुख काट्ने र विद्युत्का पोलहरू स्थानान्तरण गर्ने झन्झटले भौतिक प्रगति नदेखिएको बताए ।
‘रुख काट्न वनको अनुमतिका लागि धेरै प्रक्रियागत कारण र विद्युत्का पोलहरू हटाउन पनि त्यस्तै झन्झट छ । यी २ वटा मुख्य काम नगरी अरु काम गर्न नै मिलेन । अब दशैंपछिबाट भौतिक प्रगतिको काम बल्ल बढ्दै जान्छ । अहिले त २ प्रतिशत काम भएको होला,’ दाहालले भने ।
अहिले सडक क्षेत्रभित्र पर्ने रुखमा चिह्न लगाउने काम भएको छ । बुटवलदेखि पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटसम्ममा झण्डै ५० हजार रुख काट्नुपर्ने अवस्था छ । दाहालले भने, ‘रूख हिल कटिङबाट काट्नको लागि डिजाइन फिक्स भएको छ । काम अगाडि बढेको छैन । दशैंपछि काट्न शुुरू हुुन्छ ।’
बर्दघाट पश्चिततर्फ पर्ने ९ वटा पुलको पाइलिङ (पिल्लर) जडानको काम गरिएको छ । दशैंपछि एकैसाथ १ हजार २०० कामदारसम्म लगाएर काम गराइने जनाइएको छ । कोरोना महामारीबीच अन्य धेरै ठूला आयोजनाका काम अगाडि बढे पनि सडक विस्तार आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन ।
आयोजनाका अर्का इन्जिनीयर प्रमोद अधिकारीले वर्षाका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘वर्षामा रुख काट्न पनि पाइँदैन । पानीले गर्दा ढिलाइ भयो । अब दशैंपछिबाट कामले गति लिन्छ ।’ ११४ किलोमिटर सडक २ भागमा विभाजन गरी काम गर्ने योजना छ । गैडाकोटदेखि दाउन्ने र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्म २ भागमा विभाजन गरिएको छ । एउटै प्याकेजमा काम गर्दा निर्माण कार्य ढिला हुने भन्दै २ वटा प्याकेज बनाएको हो । पूर्व साइटको कार्यालय नवलपुर जिल्लाको रजहरमा छ भने पश्चिम साइटको कार्यालय पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा छ । सडक गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशको मुख्य राजमार्गमा पर्ने महत्त्वपूर्ण सडक हो ।
२०१८ सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको सडक ५७ वर्षपछि बस्तीमा ६ र जंगलमा ४ लेनमा विस्तार गर्न शुरू गरिएको थियो । सडकमध्ये २८ किलोमिटर ६ लेन, १४ किलोमिटर ३ लेन र बाँकी ४ लेन हुुनेछ । हाल सडक २ लेनको छ ।
सडक नवलपरासीको दाउन्ने पहाडमा ३ लेनको हुनेछ । बर्दघाटको प्रतिक्षालयदेखि दुम्कीबाससम्म १४ किलोमिटरको सडक अप्ठ्यारो ठाउँ भएकाले ३ लेनको बन्ने जनाइएको छ । पहाड चढ्ने गाडीले २ लेन र झर्ने गाडीले १ लेन प्रयोग गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ऋण सहयोगमा सडक विस्तार हुन लागेको हो । सडकको ठेक्का चाइना स्टेट कन्सट्रक्सनले पाएको छ । नारायणगढ–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटवल ४९ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै सडक साँघुरो हुँदै गएको थियो ।
सडक आयोजनाको कूल लागत १५ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये एडीबीले ८५ प्रतिशत रकम ऋण उपलब्ध गराउने छ । बाँकी थप रकम नेपाल सरकारकै हुनेछ । एडीबीले नेपाल सरकारलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ४ वर्षसम्म सडकको मर्मत–सम्भार चाइना स्टेट कन्सट्रक्सनले नै गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सडक खण्डमा विस्तारसँगै २१ वटा नयाँ पुल बन्ने छन् । अहिले जहाँ–जहाँ पुल छन्, तिनीहरूको दायाँ–बायाँ गरी २१ वटा साना–ठूला पुल पनि बनाउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।